MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: မနောင်ကွင်းဆိုတာ ၀န်ကြီးချုပ်ပိုင်လား? ရိုးရာအဖွဲ့ပိုင်လား? မနောင်ကွင်းဆိုတာ ပြည်သူပိုင်လား?
မနောင်ကွင်းသည် အများပြည်သူပိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ သို့သော် ကချင်စစ်ပွဲ သုံးနှစ်ပြီးအထိမ်းအမှတ်နေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒေသခံလူထုများမှ ပြည်သူများအတွက် စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရးများ တန်းတူရဖို့လိုကြောင်း ဆိုင်းဘုတ်များ စတစ်ကာများ စိုက်ထူပြီး ပြည်သူလုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့စဉ်ကလည်း ထိုဆိုင်းဘုတ်အားရုတ်သိမ်းပေးရန် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ပြောဆိုခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း အရက်ကြော်ငြာဖြစ်သည့် HIGH CLASS ဆိုင်းဘုတ်များကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ထောင်ခွင့်ပြုထားသည်။ မနောင်ကွင်းအတွင်း အမိုက်များကြိုက်သလိုပစ်ခွင့်ပေးထားသည်။ အတွဲများ လူမြင်မတော်အောင် ကြိုက်သလို ပွေ့ဖက်နှမ်းခွင့်ပေးထားသည်။ ၀န်ကြီးချုပ်လည်း ဘာမှပြောကြားခြင်းမရှိ။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှလည်း ဘာမှပြောကြားခြင်းမရှိ။ ရိုးရာအဖွဲ့လည်း ထိုကိစ္စတွေနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပါစပ်မဖွင့်ခဲ့။
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရမှ ဒေသခံများကန့်ကွက်သည့်ကြားများ သူတို့ကြိုက်သလို မနောင်ပွဲကျင်းပရန် စီစဉ်နေဆဲ။ သူစိတ်ကြိုက်အကောင်အထည်ဖော်နေဆဲ။ သို့သော် အများအတွက်အကျိုးရှိသည့်အရာများ ပြည်သူပိုင်သည့်
(၁) မနောင်ကွင်းအတွင်း တွေ့ရသည့် HIGH CLASS အရက်ကြော်ငြာ ဆိုင်းဘုတ်။
(၂) ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ဗိုလ်လောင်များသေဆုံးမှု တစ်လပြည့် အထိမ်းအမှတ် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများလှုပ်ရှားမှု
(၃) ကချင်စစ်ပွဲသုံးနှစ်ပြည့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်လှုပ်ရှားစဉ်။
(၄) မနောင်ကွင်းတွင် ပုံနေသည့် အမိုက်များ
(၅) ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ဗိုလ်လောင်များသေဆုံးမှု တစ်လပြည့် အထိမ်းအမှတ် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများလှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းမျာဲးအား ရိုးရာအဖွဲ့နှင့် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များတွေ့ဆုံ
at 12/20/2014 11:31:00 PM